Mee nama tokko wajjiin waliin isin barsiisuu?Alamu Simee Eenyu ? Icciti Alemu Sime fi ODP(OPDO) – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosMee nama tokko wajjiin waliin isin barsiisuu?Alamu Simee Eenyu ? Icciti Alemu Sime fi ODP(OPDO)
Mee nama tokko wajjiin waliin isin barsiisuu?
By Dulaa Dhugassaa Abdiisaa
Alamu Simee Eenyu ?
Icciti Alemu Sime fi ODP(OPDO
Alemu Simee Itti Gafatamaan waajjira dhaaba odp, “abon dubarti oromoo dirqisise gudeeda, uummata saama, Bank Saama, uummata ajjeesa, waraanni ABO Tigiree dha,” jedhe holola soba waan hogganaa tokko irra hin eegamne facaasu kun eenyu?
#1ffaa Alemu Sime Oromiyaa gutummaa fi Ethiopia keessaa maqaa investmentiin lafa gurguree fixee Oromoo naannoo Finfinfine kan Azeb Mesfin faa waliin buqqisisaa ture OPDO keessa nam tokko. Billihoner Azeb Mesifn fi Siyyum Mesfin itti aanee mallaaqa gudda kan China, Indonesian fi Hong Kong Bank tullatee ijoollee isaa kan warra TPLF Arkabee, Mesfin kkf waliin chaayinatti barsifataa jiru dha,
#2ffaa Alemu Sime Zelalem Jemaneh, Habtamu Haile Michel, Damelash Gebiremichail, Tesfaye Abebe kkf warra Azeb Mesfin ijaarte Alemayyoo Atoomsaa Ajjeesifte dha. Alemu Sime yeroo Alemayyoo Atomsaa Malamaltumman nama 120 hidhee Azeb Mesfin tu Alemu Simee dhooksan chayinaatti ergite hidha jala bafte icciti ishee dhokfachuf,
#3ffaa Alemu Sime amma iyyuu tanaan Warabessa Guyyaa waliin qunnamtii cimaa kan qabu warra jijjirama Lammaa Magarsaa irratti yakka badaa hojjeetaa jiran keessa isaa tokkoffaa dha, namni kun nama OPDO keessatti amala godhate mataa gadii qabate sabboontota OPDO balleessa ture, nama warri TPLF hundi isaatti gargaramtee Oromoo diiguuf adeema jirtu qara kara lamaati.
Namni kun nama hoggantoota OPDO akka Lamma Magarsaa, Abiyyii, fi Birhanuu Tsaggayee faa balleesisuu danda’uu dha. kayyoon isaa yakka isaaf itti nagafachisa jedhe kan yaadu hunda waan danda’een balleessee of jirachisuu dha
#4ffaa Namni kun lammumman isaa Oromoo miti Nafxanyaa Arba guguuti jedhama Abban isaa Arsi jiraate Afaan Oromoo nama hin beekne Alemu sime illee nama bara isaa guutu Afaan Amharaa qofa dubbatu kan fakkeessuuf illee sabbonummaa hin qabne dha.
#5ffaa Alemuu Simee yakka waajjira Inveestmentiin Oromiyaa keessatti,fi saamicha lafaa Naannoo Finfinnee irrattii akka geggessaa ture Oromoon hundi utuu beeku bakka adda addaatti daddaffiin jijjiruu dhaan kan hojjeechisaa jiran yakka inni hojjete wala’aluun utuu hin tane Nafxanyaa waan ta’eef sodaa fi saafuu tokko malee akka kaleessa sanatti akka dhaabbilee Oromoo irratti ololuuf meeshaa godhachuuf
#6ffaa Alemu sime yeroo amma Nafxanyoota Obbo Alemayyoo Atomsaa Malamaltumman ari’ee hunda deebise ijarrachuun sabboontota achi dhiibuun dhiibuun warra maqaa haaromsaan jirtu qofaatti hambise akkuma Alemayyoo Atomsaa akkan dhabamsisuuf qophaa’un isaati ,
ODP kan kuffisu ABO ykn TPLF utuu hintaane hattuu fi saamtu ODP keessatti TPLF ijarrachaa jirtu kan akka Alemu Sime kanafadha.
TPLF gaafa Lamma fi Abbiyyi rukutte namni isheen qopheffatte Alemu Simeti kana hubadha.Yeroo ammaa kana waajjirri ODP Wajjira Nafxanyaa ta’ee jira Afaan Amharaa dubbatu jedhama Bareessituu dha kaasee hanga Alemu Simeetti yakkamtoota, Nafxanyaa Makaa fi diqaalatu itti guurame jedhu keessa beektonni. TPLF ODP keessa bakka hundatti of ijaaraa jirti.
#7ffaa Alemu sime nama kayyoo of jiraachisu qofaaf hojjeetu, nama guyya guyyaan hojii sagagalumman beekamu, nama haaloo ba’uun nama balleessuf qoofa tarsimoo baasa oluu waa’ee guddina biyya jijjiraama fi foyya’insa biyyattif mul’ata homaa hin qabne farra uummata Oromoo isaa tokko dha.
Alamuu Simee waa’een kee Seenaa keessa jira!!
OPDOn Midiyaa ESATtiif Deegarsa Qarshii Milliyoonaa 10 Kennitee